Solutions Technologies Innovative waxay leedahay xafiis madaxeed Gurgaon. ITS is primarily into IT trainings, training rooms and solutions provider company. ITS Gurgaon xarumaha tababarka waxay ku qalabaysan yihiin mishiinada sare, koronto dhejiska iyo guddiga cad.
Tiknooloojiyada Teknolojiyada Cusub ee ku salaysan Xarunta Magaalada Noida. Xarunta tababarka ITS waxay bixisaa tababar farsamo iyo qolal tababar oo loogu talogalay shirkad siisa jawi waxbarasho oo habboon
Solutions Technologies Innovative ayaa leh xarumo tababaro Delhi, caasimadda India. ITS ugu horreyntii waa tababaro IT, qolalka tababarka kirada, Tababar loogu talagalay ardayda kuleejka.
Solutions Technologies Innovative ayaa leh meelo badan oo tababar ah Bangalore, Karnataka. ITS waxay bixisaa tababar farsamo iyo xarumo tababar oo loogu talagalay shaqaaleynta shirkad loogu talagalay baahida tababarka.
Tiknooloojiyada cusub ee teknoolajiyadda ayaa leh qolalka tababarka ee Chennai, caasimadda Tamil Nadu. ITS waxay ugu horreyn ku leedahay tababarka IT-ga, qolalka tababarka kirada iyo shirkadda adeeg bixiyaha ITES.
Solutions Technologies Innovative waa xarumaha tababarka ee Hyderabad, oo ah caasimadaha labada koonfurta, Andhrapradesh iyo Telangana. ITS inta badan waxay ku jirtaa tababaro IT ah, qolal tababar oo kiro ah.
Innovative Technology Solutions training center is situated in Kolkata,West Bengal. ITS training centers in Kolkata isagoo yeesha kaabayaal heer sare ah oo loo maro tababaro farsamo.
Tiknoolijiyada cusub ee "Technology Technologies Solutions" khabiirada bixiya tababaro iyo qolal tababar oo ku yaalla dhammaan Hindiya oo leh xarumo tababaro oo badan oo ku yaal Mumbai, Maharashtra.
Tiknoolijiyada Cusub ee "Solutions Technology" ayaa khabiiro ku siinaya qolal tababaro iyo tababaro oo dhan oo ku baahsan Hindiya oo leh xarumo tababaro oo badan oo ku yaal Pune, Maharashtra.